လိင်ကွဲယောက်ျားများတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏အာရုံကြောအလွှာများ - အဖြစ်အပျက်နှင့်ဆက်စပ်သော fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
J ကို Physiol Anthropol ။ ၂၀၁၅; ၃၅: ၈ ။
2016 မတ်လ 8 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1186/s40101-016-0089-3
ဂျီဝူး Seok, Jin-ဟွန် Sohn, နှင့် Chaejoon Cheong
လိင်အပြုအမူသည်မျိုးစိတ်များရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ is ဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်ပုံရိပ်နည်းလမ်းများ၏တိုးတက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ယန္တရား၏နားလည်မှုကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ယန္တရားနှင့်ပတ်သက်ပြီးယခင်လေ့လာမှုများသည်အများအားဖြင့်ပိတ်ဆို့မှုပုံစံပုံစံကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပိုမိုတင်းကျပ်သောစမ်းသပ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော်လည်းဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောပါရာဒိုင်းသည်စိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုချက်ချင်းသိရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါပါရာဒိုင်းကိုလည်းအချိန်မှတဆင့် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုများ၏လေ့လာရေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုသည်အဖြစ်အပျက်နှင့်ဆက်စပ်သော fMRI ကို အသုံးပြု၍ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်နေရာအမျိုးမျိုးတွင် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်းအပြင် hemodynamic တုန့်ပြန်မှုအပြောင်းအလဲများကိုစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ပြင်းထန်သောတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးသောအချက်များပါဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်အမျိုးမျိုးသောဒေသများရှိလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်: သိမြင်မှုအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သော (1) activation ဒေသများ: အ occipital ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးနှင့် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သော (2) activation ဒေသများ: အ thalamus နှင့် amygdala; လှုံ့ဆျောမှုအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သော (3) activation ဒေသများ: အ anterior cingulate gyrus, orbitofrontal cortex နှင့် insula; နှင့် (4) ဇီဝကမ္မအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သော activation ဒေသများ: အ precentral gyrus, putamen နှင့် globus pallidus ။ ယခင်လုပ်ကွက်ဒီဇိုင်းလေ့လာမှုများတွင်ကောင်းစွာမတွေ့ရှိခဲ့သော putamen နှင့် globus pallidus တို့၏လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ hemodynamic တုံ့ပြန်မှု၏ရလဒ်မှာသူတို့အားဒေသများရှိအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုသည်အခြားဒေသများ၏အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုကိုပိုမိုယာယီရှုထောင့်ပြသခဲ့သည်။
ဤရလဒ်သည်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောပါရာဒိုင်းသည်ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာသော်လည်းမကြာမီပျောက်ကွယ်သွားသော ဦး နှောက်ဒေသများ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်ပိုကောင်းကြောင်းအကြံပြုသည်။
keywords: လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၊ သွေးကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု၊ အဖြစ်အပျက်နှင့်ဆက်စပ်သောပါရာဒိုင်း၊ Globus pallidus, Putamen
လိင်စိတ်နိုးထမှုသည်သိမြင်မှု၊ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ၊ ဆိုလိုသည်မှာလိင်စိတ်နိုးထမှုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများသို့မဟုတ်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည့်အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ (ဥပမာအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ် hedonia အားဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုများ) နှင့်အနှုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုများ (ဥပမာ - စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ပေးထားသောအရာဝတ္ထု၏အမြင်ပြီးနောက် [1-3] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးယခင်လေ့လာမှုများသည်အာရုံကြောသွေးကြော၊ အလိုအလျောက်အာရုံကြောနှင့်ဟော်မုန်းစနစ်များ၏တုန့်ပြန်မှုယန္တရားများအပါအ ၀ င်လိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။4-6] ။ မကြာသေးမီက ဦး နှောက်ပုံရိပ်နည်းပညာတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များအပါအ ၀ င် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြောင့်၎င်းသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုလေးစားမှုဖြင့်သိမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက fMRI ကို အသုံးပြု၍ အမြင်အာရုံတင်ပြသောလိင်လှုံ့ဆော်မှု၏အာရုံကြောယန္တရားကိုသုတေသနများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအရလိင်စိတ်နှိုးဆွစေသောလှုံ့ဆော်မှုများသည်မျိုးစုံသောအာရုံကြောကွန်ယက်များဖြစ်သော parietal lobobe, temporo-occipital lobobe, frontal lobobe, cerebellum, insula, anterior cingulate gyrus, amygdala နှင့် striatum ကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှု၊ သိမှု၊ အစိတ်အပိုင်းများ [7-13] ။ သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက် ဦး နှောက်ယန္တရားနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုအများစုသည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းကိုမွေးစားခဲ့သည်။ အဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဒီဇိုင်းကို အခြေခံ၍ သုတေသနကိုအနည်းငယ်သာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အချို့သောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆက်နွှယ်နေသော ဦး နှောက်identifyရိယာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းစမ်းသပ်မှုအခွအေနေနှင့်စက္ကန့်များစွာအလှည့်အလှည့်အတွက်အခွအေနေတင်ဆက်။ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေ (ဥပမာ၊ လုပ်ငန်းအခြေအနေ) နှင့်အခြေခံအခြေအနေကိုတနည်းအားဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲတင်ပြခြင်းအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ ဦး နှောက်taskရိယာကိုအလုပ်အခြေအနေသို့ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဦး နှောက်areaရိယာကိုသွေးထဲကအောက်ဆီဂျင်ကိုမှီခိုသော (BOLD) အချက်ပြမှုများကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ အဆိုပါပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းဖြစ်ရပ် -related ဒီဇိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချို့သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဒေသများရှာဖွေတွေ့ရှိမှာပိုကောင်းဖြစ်လူသိများ [14, 15] ။ ဒါဟာလှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှုပါရာဒိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းကိုလျှောက်ထားသောအခါတစ် ဦး ချင်းစီလှုံ့ဆော်မှုများအကြားခြားနားချက်များနှိုင်းယှဉ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်အချိန်အပိုင်းအခြားအချက်အလက်များ၏အမြင်အာရုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်အပိုပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဆူညံသံများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနိုင်သည်။14, 15] ။ သို့သော် block design တွင်အားနည်းချက်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလားတူအခြေအနေမျိုး၏လှုံ့ဆော်မှုများကိုစက္ကန့်များစွာအတွင်းတင်ပြသောကြောင့်လေ့ကျင့်ခြင်းပြtheနာပေါ်လာနိုင်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုကိုပြသရန်အချိန် ပို၍ ကြာလာသည်နှင့်အမျှ BOLD အချက်ပြမှုသည်လျော့နည်းသွားသည်။16].
fMRI အတွက်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောဒီဇိုင်းသည်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာရှိသောလေ့လာမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ တီထွင်သည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်ရပ်များ (ဥပမာ - တင်ပြထားသည့်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ) အတွင်းဖြစ်ပေါ်သောလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည်။17] ။ ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောဒီဇိုင်းကိုစမ်းသပ်ချက်များတွင်အသုံးပြုသောအခါပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလိုအပ်သည်။18] ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စမ်းသပ်မှုအရေအတွက်ကိုအားနည်းသောအချက်ပြမှုအားလျော်ကြေးပေးရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ စမ်းသပ်မှုများကျပန်းမတည်မငြိမ်ဖြန်ခြင်းကိုလည်း activation အချက်ပြမှုမတူစေရန်သေချာစွာအသုံးပြုသင့်သည်။ ဤအချက်အလက်သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်သည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်လည်းထင်ဟပ်သင့်သည်။19] ။ အဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သောဒီဇိုင်းသည်လုပ်ကွက်ပုံစံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မကြာသေးမီကတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းတွင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီနှင့်အတူပါ ၀ င်သော BOLD signal ကိုဆိုလိုသည်မှာ stimulus ၏တင်ပြမှုကိုအချိန်ကာလအတိုင်းအတာအတွက်လှုံ့ဆော်မှု၏တင်ပြချိန်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ရရှိသောပုံရိပ်အချက်အလက်များအား align နှင့်တွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့်တွေ့နိုင်သည်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်မှုပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းကိုနည်းလမ်းနှင့်မတူဘဲ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုအတွက်ယာယီပြောင်းလဲမှုကို detect နိုင်ဖြစ်ခြင်း၏အားသာချက်ရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလုပ်ကွက်ဒီဇိုင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဒီဇိုင်းတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစွမ်းရည်မြင့်မားခြင်း (မြင့်မားသောအချက်ပြမှု - ဆူညံသံအချိုး (SNR)) ဖြင့်ပုံရိပ်နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းမှပြုလုပ်သည်။ အဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သောဒီဇိုင်းပုံစံများကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှုများသည်ကြီးထွားလာသည်။17] ။ ဒါဟာနှိုးဆွတင်ပြချက်အချိန်, interstimulus ကြားကာလနှင့်လှုံ့ဆော်မှု၏တင်ပြချက်အမိန့်၏တင်းကျပ်စွာစမ်းသပ်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ဤအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထင်ဟပ်သင့်သည်ဖြစ်သောကြောင့်နည်းလမ်းတွင်ရှုပ်ထွေးသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလိုအပ်သည်။18] ။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှုဖြစ်ရပ် -related ဒီဇိုင်းကိုကျပန်းနေသည်နှင့်အမျှလှုံ့ဆော်မှုအမိန့်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်ရတဲ့ confounds လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သောဒီဇိုင်းတွင်ဆက်တိုက်မလှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရနိုင်ပါ။ တင်ပြမှုအရှည်သည်လည်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုပုံစံထက်တိုတောင်းသည်။18] ။ ထို့ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကဲ့သို့ယာယီ ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုအား block design နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သောဒီဇိုင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာတိုင်းတာနိုင်သည်။18] ။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်ပတ်သက်သောဤအဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှုအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။13, 20] ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုများကလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် ဦး နှောက်အချက်ပြမှု၏ယာယီပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာခြင်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒေသများကိုသာတိုင်းတာခြင်းမဟုတ်ဘဲတစ်ခုလုံးကို ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးသို့မဟုတ် ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် hemodynamic တုန့်ပြန်မှုကိုလေ့လာခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, လေ့လာမှုဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သော fMRI လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်areasရိယာများနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ပတ်သက်သော hemodynamic တုံ့ပြန်မှုကိုဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လေ့လာမှုကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအပေါ်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သော fMRI သုတေသနသုံးပြီးကြိုတင်လေ့လာမှုများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လေ့၏လျင်မြန်စွာအပြောင်းအလဲနဲ့ကြောင့်ကောင်းစွာမတွေ့ရှိရသော ဦး နှောက်ဒေသများရှိ activation detect နိုင်ကြောင်းတွေးဆ။ ထို့အပြင် ISI အချိန်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ဒေသများရှိ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုကိုလေ့လာရန်မျှော်လင့်ရသည်။
စုစုပေါင်းအသက် ၂၂ မှ ၂၉ နှစ်အကြားအရွယ်ရောက်ပြီးသောယောက်ျား ၁၇ ယောက်သည်စမ်းသပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများအားလုံးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ လိင်ဆိုင်ရာစော်ကားခံရသူများသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်ခံနေရသူများကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ ပါ ၀ င်သူများကစမ်းသပ်မှု၏အကြောင်းအရာများအကြောင်းကြားပြီးနောက်ဤလေ့လာမှု၏စမ်းသပ်မှုတွင်ပါဝင်ရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်။
ကျန်းမာသောအထီးကောလိပ်ကျောင်းသား ၁၃၀ ပါဝင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် fMRI လေ့လာမှုအတွက်လိင်လှုံ့ဆော်မှုကိုရွေးချယ်ရန်အကြိုစမ်းသပ်မှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိရောက်သောရုပ်ပုံစနစ် (IAPS) မှဓာတ်ပုံ ၂၃၇ ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။21] နှင့်အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်သင်တန်းသားများကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အင်တာနက်ရှာဖွေမှုမှရုပ်ပုံများတွင် porn နှင့်အဝတ်မရှိသောအမျိုးသမီးများ၏ဓါတ်ပုံများပါဝင်သည်။ သင်တန်းသားများကို“ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုခံစားမှုခံစားခဲ့ရသလား” ဟူသောမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်သင်တန်းသားများကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုခဲ့သည်။ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုချင်းစီကို“ yes” သို့မဟုတ်“ no” ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏ပြင်းထန်မှုကို ၁ မှ (အနည်းဆုံးပြင်းထန်သော) ၅ မှ ၅ အထိ (အများဆုံးပြင်းထန်သော) အဆင့် ၅ ချက်ရှိ Likert စကေးကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သက်ရောက်မှုကိုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုခံစားခဲ့ရသောပါဝင်သူများ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုပါဝင်သူများအားလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်ကြုံတွေ့ရသောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏ပြင်းထန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ စစ်ဆေးမှုမတိုင်မီရလဒ် (၈၀%) သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်မှုနှိုးဆွမှု (၄) ချက်သို့မဟုတ်ထိရောက်မှုရှိသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအဖြစ်ဓာတ်ပုံ ၂၀ (IAPS ရုပ်ပုံ ၆ ခုနှင့်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုမှ ၁၄ ခု) ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဆယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုမဖြစ်စေသောဓာတ်ပုံ ၂၀ အားလိင်နှင့်မဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ လိင်နှင့်မသက်ဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများသည်သဘာဝအားဖြင့်ရေအားကစားလှုပ်ရှားမှု၏ပုံရိပ်များ၊ အနိုင်ရသည့်အောင်ပွဲဆင်နွှဲခြင်းနှင့်နှင်းလျှောစီးပုံနှင့်ဆင်တူသည့်မြင်ကွင်းများကိုပြသသည်။ IAPS နှင့်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုများမှရွေးချယ်ထားသောလှုံ့ဆော်မှုများသည်သူတို့၏နှစ်သက်ဖွယ်ရာအဆင့်အတွက်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုအတွက်သာယာသောပျော်ရွှင်မှုနှင့်နှိုးဆွမှုရမှတ်များမှာအသီးသီး ၅.၂၃ (စံသွေဖည်ခြင်း (SD) = ၀.၃၆) နှင့် 1 (SD = 5) တို့ဖြစ်ကြသည်။ လိင်မှုကိစ္စနှိုးဆွမှုနှစ်ဆသောလိင်မှုနှိုးဆွမှုသည် ၄ ​​င်းတို့၏ပျော်ရွှင်မှုအဆင့်အတွက်M = 5.10, SD က = 0.31) နှင့်နှိုးဆော်ခြင်း 4.96 (SD ကို = 0.38) ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမလှုံ့ဆော်မှုများအကြားသာယာပျော်ရွှင်မှုနှင့်နှိုးဆွမှုတို့၏ယုတ်သောရမှတ်များမှာသိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ (t = -1.18, p > 0.05; t = -1.99, p > 0.05) ။
အဆိုပါ fMRI စမ်းသပ်ပါရာဒိုင်းမှာတော့စမ်းသပ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ အကျဉ်းညွှန်ကြားချက်6s ကိုတစ် ဦး ချင်းစီအဘို့, ကျပန်းရွေးချယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏တင်ပြချက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အစအ ဦး မှာ5s ဘို့ပေးထားခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချင်းချင်းလှုံ့ဆော်မှုကြားကာလ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ 7-13 s ကို (ပျမ်းမျှ 10 s ကို) အတွက်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းစမ်းသပ်ချိန်သည် ၈ မိနစ်နှင့် ၄၈ နာရီဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုတင်ပြမှုများအကြားကြာမြင့်စွာကြာသောကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်သင်တန်းသားများကိုကြားကာလအတွင်းစိမ်းလန်းသောမျက်နှာပြင်ကိုပြသသည့်အခါ (အစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်ကို ၁၂ ကြိမ်ပြသခဲ့သည်) တုံ့ပြန်သည့်အခါနှိပ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ fMRI စမ်းသပ်မှုပြီးဆုံးပါကသင်တန်းသားများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွင်အောက်ပါမေးခွန်းသုံးခုကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍“ ဟုတ်တယ်” သို့မဟုတ်“ မဟုတ်ဘူး” ဟုဖြေရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ ဒုတိယအချက်မှာလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည် Likert စကေး ၁ မှ (အနည်းဆုံးပြင်းထန်မှု) မှ ၅ အထိ (အများဆုံးပြင်းထန်သော) အထိမည်မျှပြင်းထန်သည်ကိုခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင်တန်းသားများကိုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစီနှင့်ထိတွေ့စဉ်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု မှလွဲ၍ သူတို့ခံစားခဲ့ရသောအခြားစိတ်ခံစားမှုများကိုအစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။
ပုံရိပ်များကိုရယူရန် 3.0T Philips MR Scanner ကို သုံး၍ EPOLD fMRI scan နည်းလမ်းကို BOLD ပုံရိပ်များကိုရရှိခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းစုစုပေါင်းဆလိုက် ၃၅ ခုကို TR = 35, TE = 2000 ms၊ ကွာဟမှုမရှိသောအထူ ၅ မီလီမီတာ၊ ၆၄ × ၆၄ matrix၊ FOV ၂၄ × ၂၄ စင်တီမီတာ၊ လှန်ထောင့် = ၈၀ ပုံ၏ပုံသဏ္parameterာန်ကို အသုံးပြု၍ ဆက်တိုက်စုဆောင်းခဲ့သည်။ °နှင့် 28 မီလီမီတာတစ်ခု In- လေယာဉ် resolution ကို။ T5 ၏ခန္ဓာဗေဒပုံရိပ်အတွက် FLASH sequence ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်နှစ် ဦး ကိုအမြီးတွဲ t SPSS 22 ကို အသုံးပြု၍ ကြိမ်နှုန်း (အခြေအနေတစ်ခုစီရှိဓာတ်ပုံ ၂၀ မှလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုဖော်ပြသည့်အရေအတွက်လှုံ့ဆော်မှု၊ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်) နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုပြင်းထန်မှု (ဆိုလိုသည်မှာတစ် ဦး ချင်းစီတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု၏ပျမ်းမျှအဆင့်) ကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်စမ်းသပ်မှုကို SPSS 20 ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လိင်နှင့်ကြားနေအခြေအနေများအကြား။ fMRI အချက်အလက်များကိုစာရင်းအင်း Parametric မြေပုံ၊ ဗားရှင်း ၈ (SPM 8, Wellcome Department of Imaging Neuroscience, London, UK) ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ preprocessing အဆင့်တွင်, fMRI ပုံရိပ်တွေ၏ဝယ်ယူစဉ်အတွင်းထုတ်လုပ်အချပ်ပုံရိပ်တွေအကြားအချိန်ခြားနားချက်ကိုတညျ့ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုအတွင်းလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပိုပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားရန်ပါဝင်သူများ၏ ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုများကို ၃ ဒီဂရီတင်းတင်းကိုယ်ခန္ဓာမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ၆ ဒီဂရီလွတ်လပ်မှုဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည် (x, y, z, လိပ်, အစေးနှင့်ယော) ။ ထို့နောက်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အဓိကမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်နေရာဒေသအလိုက်ပုံမှန်ပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်းများပြုလုပ်သည်။ ပါဝင်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ fMRI ပုံရိပ်များကို Montreal Neurological Institute (MNI) ကိုသြဒိနိတ်စနစ်သို့ချိန်ညှိရန်အတွက်ပါဝင်သူတစ် ဦး ၏ fMRI ပုံရိပ်များ၏ပျမ်းမျှပုံရိပ်သည်၎င်းပါဝင်သူများ၏ခန္ဓာဗေဒပုံရိပ်နှင့်အဓိကမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ချိန်ညှိထားသောပုံရိပ်ပုံကို MNI ၏သြဒိနိတ်စနစ်နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ထုတ်လုပ်ပုံမှန် parameter သည်ကိုအသုံးပြု။ , fMRI ပုံရိပ်ကို MNI ကိုသြဒိနိတ်စနစ်ကိုက်ညီခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အချက်အလက်များကိုချောချောမွေ့မွေ့ Gaussian kernel ကို အသုံးပြု၍ အပြည့်အ ၀ အကျယ် ၈ မီလီမီတာကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူတစ် ဦး စီအတွက်တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကြောင့် ဦး နှောက်areasရိယာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် preprocessing ပြီးနောက်ပါဝင်သူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အခြေအနေနှစ်ခု (ဆိုလိုသည်မှာလိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအခြေအနေ) တို့ပါ ၀ င်သော design matrix ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အပိုပစ္စည်းနှင့်ဆူညံသံများကိုလျှော့ချရန်ဒီဇိုင်းပုံစံကိုဖန်တီးစဉ်တွင်အမျိုးမျိုးသောဆုတ်ယုတ်မှုကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကြောင့်အချက်ပြမှုအပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှု၏ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်တွေ့ရှိရသောဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းပမာဏကိုဆုတ်ယုတ်စေသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ခန်း၏နောက်ကျသောအဆင့်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောနိမ့်သောအချက်ပြညှိနှိုင်းမှုအတွက် SPM 8 တွင်အကောင်အထည်ဖော်သောအချိန်မော်ဂျူးရွေးချယ်မှုကိုဆုတ်ယုတ်စေသော variable တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပါဝင်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုက ဦး နှောက်identifyရိယာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမလှုံ့ဆော်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ပြသခဲ့သည်။ အုပ်စုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, တနမူနာ t စမ်းသပ်ပြီးတွဲ t စမ်းသပ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ နမူနာတစ်ခု t အခြေအနေတစ်ခုစီတွင် (ဥပမာ - လိင်မှုနှိုးဆွမှုအခြေအနေနှင့်လိင်မဟုတ်သောအခြေအနေ) အတွင်း ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အတွဲ t လိင်မှုနှိုးဆွမှုအခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအခြေအနေနှစ်ခုအကြား ဦး နှောက်ကိုလုပ်ဆောင်မှုခြားနားချက်ကိုဆိုလိုသည်။ မှာ activated voxel ၏ MNI ကိုသြဒီနိတ်များ p fMRI လေ့လာမှုတွင်သိသာထင်ရှားသောအဆင့်ဖြစ်သော ၀.၀၅ (တည့်မတ်ထားသောမှားယွင်းသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်း (FDR)) ၏တန်ဖိုးကိုလေ့လာမှုတွင်သိသာထင်ရှားသောလုပ်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် MNI ကိုသြဒီနိတ်များသည် Talairach ကိုသြဒီနိတ်များသို့ပြောင်းလဲပြီး ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ရှားမှု၏ခန္ဓာဗေဒတံဆိပ်ကပ်ခြင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ ထို့အပြင် activated ဒေသများ၏ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့, အကျိုးစီးပွားဒေသများ၏ (ROIs) ၏ရာခိုင်နှုန်း signal ကိုပြောင်းလဲမှု MarsBaR ကိုအသုံးပြု။ ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ထုတ်ယူခဲ့သည်http://www.sourceforge.net/projects/marsbar) ။ ROI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်အသုံးပြုသောကို ates ဒီနိတ်များကိုနမူနာတစ်ခု၏ရလဒ်မှရရှိသည် t စမ်းသပ်မှုနှင့်အချင်းဝက်5မီလီမီတာနှင့်အတူအထွတ်အထိပ် voxel အပေါ်ဗဟိုပြုစက်လုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရအခြေအနေတစ်ခုစီတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကြိမ်နှုန်းသည် ၇၄ ± ၇.၇၉% (ဆိုလိုသည်မှာ± SD ဖြစ်သည်။ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်) နှင့်အခြေခံအခြေအနေတွင် ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀.၀၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ငါးမှတ်စကေးအပေါ်အခြေခံပြီးပြင်းထန်မှုစမ်းသပ်အခြေအနေ 74 မှတ်± 7.79 (ပျှမ်းမျှ± SD က) နှင့်အခြေခံအခြေအနေ0င်0င်ခဲ့ကြသည်။ တစ်တွဲ t စမ်းသပ်မှုလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (ကြိမ်နှုန်းအကြား) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိကွောငျးညွှန်ပြ t (16) = 29.01, p <0.001; ပြင်းထန်မှု t (16) = 39.43, p <0.001) ။
အုပ်စုတစ်စုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် ဦး နှောက်ပုံရိပ်၏ရလဒ်များ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုတင်ပြချက်အတွင်း ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတုံ့ပြန်မှုများ
လိင်နှင့်မဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်ပြုလုပ်သော ဦး နှောက်areasရိယာများတွင်ကျူနီယပ်စ်၊ medial occipital gyrus၊ lingual gyrus၊ fusiform gyrus၊ hipocampal gyrus (BA 27)၊ posterior cingulate gyrus နှင့် cerebellum (တည့်သော FDR) တို့ဖြစ်သည်။ p <0.05) (ဇယား 1) ။
လိင်မှုနှိုးဆွတင်ပြချက်အတွင်း ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတုံ့ပြန်မှု
လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုတင်ပြသည့်အခါ occipital gyrus၊ precentral gyrus၊ anterior cingulate gyrus (BA 24)၊ hipocampal gyrus (BA 27)၊ p <0.05) (ဇယား 2) ။
နှစ် ဦး နှစ်ဖက် medial occipital gyrus (BA 18, 19), fusiform gyrus (BA 37), precuneus (BA 19), ယုတ်ညံ့ parietal cortex (BA 40), orbital frontal cortex (BA 47), thalamus, insula, လိင်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုံ့ပြန်သည့် globus pallidus, putamen နှင့် amygdala p <0.05), ဇယား3နှင့်သင်္ဘောသဖန်းမှာပြထားတဲ့အတိုင်း။ 1။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထက်လိင်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုများ၌ပိုမိုလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြသနိုင်သည့်နယ်မြေမရှိပါ။ ပုံ2တ ဦး တည်း - နမူနာ၏ရလဒ်အပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ထားသော ROIs အတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအခွအေနေများအတွက် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုပြသထားတယ် t စမ်းသပ်မှု။ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုပုံစံများအတွက်ကနူး၊ precuneus၊ fusiform gyrus, thalamus, amygdala, orbital frontal cortex နှင့် anterior cingulate gyrus များအတွက်ချောမွေ့သောကွေးသောပုံသဏ္observedာန်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ globus pallidus နှင့် putamen တို့၏ဖြစ်ရပ်တွင်ပြတ်သားသောကွေးကိုပြသည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမလှုံ့ဆော်မှုအခြေအနေများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုများကိုပြသထားသောဒေသများ။ ရိယာမှာသိသာဖြစ်ကြသည် p <0.05, FDR သည် ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးကိုအကြိမ်ကြိမ်နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်စပျစ်သီးပြွတ်အဆင့်တွင်တည့်မတ်ပေးခဲ့သည်
အကျိုးစီးပွားဒေသများရှိလိင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လိင်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုအခြေအနေများအကြားဟီမိုဒိုင်းနမစ်တုံ့ပြန်မှုများ။ တပ်ဆင်ထားသောအချက်အလက်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသွေးအောက်စီဂျင်အဆင့်မှီသည့်အချက်ပြပြောင်းလဲမှုအဖြစ်ပြသသည်။ တန်ဖိုးများကို SEM ±ယုတ်ဖြစ်ကြသည်။ The ...
ဒီလေ့လာမှုကအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေမှုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သော fMRI ကို အသုံးပြု၍ ထိုဒေသများ၏ hemodynamic တုန့်ပြန်မှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ လေ့လာမှုရလဒ်များအရလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်တွင် orbito frontal cortex, cuneus, precuneus, fusiform gyrus, anterior cingulate gyrus, amygdala, globus pallidus, putamen နှင့် thalamus တို့ပါဝင်သည်။ ဤဒေသများ၏ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုပုံတွင်ပြနေကြသည်။ 2.
ယခင်လေ့လာမှုများအရအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများအပေါ်အပြန်အလှန်အလုပ်လုပ်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ သိမြင်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာယန္တရားများပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမှ somatic nervous system ၏တုံ့ပြန်မှုအထိလုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပါဝင်သည်။22, 23] ။ ဆိုလိုသည်မှာသိမြင်မှုဆိုင်ရာယန္တရားသည်အမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်မှုသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရလျှင်၎င်းသည်၎င်း၏လိင်မှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးကိုစစ်ဆေးသည်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာယန္တရားသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှု (စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမည်မျှနှစ်သက်ကြောင်းမည်မျှ) ကြောင့်စိတ်ကျေနပ်မှုခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသနည်းဟူသည့်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုယန္တရားသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအားအပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဖော်ပြရန်ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဆိုပါဇီဝကမ္မယန္တရားလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာရုံကြောစနစ်နှင့် endocrine စနစ်၏တုံ့ပြန်မှု) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများသည်။
ဤလေ့လာမှုတွင်ဖော်ထုတ်ထားသည့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကြောင့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီနှင့် ဦး နှောက်betweenရိယာများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြနိုင်သည်။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက် medial occipital gyri နှင့် fusiform gyrus တို့သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု၏အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ပြဌာန်းခွင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုယူဆကြသည်။ အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဒေသများဖော်ထုတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့ယခင်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်သည့်အခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြခဲ့ကြသည်သည့်အခါ occipital gyri နှင့် fusiform gyrus ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကြောင့် [လှုပ်ရှားမှုခဲ့ကြသည်24-26] ။ အဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိရလဒ်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆော်ခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီဖြစ်တယ်, သူတို့ fusiform gyrus ၏ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်တင်ပြလှုံ့ဆော်မှုအသိအမှတ်ပြု၏ function ကိုဆက်စပ်ကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြ3, 27].
အဆိုပါ precuneus နှင့် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးတွင်တည်ရှိသောယုတ်ညံ့ parietal cortex ၏ activation ကိုလည်းသိမြင်မှုယန္တရားနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ထင်နေသည်။ ဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်ထိတွေ့နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်လိင်စိတ်နှိုးဆွ၏ယခင်လေ့လာမှုများအားဖြင့်ထောက်ခံသည်28, 29] ။ ဤလေ့လာမှုများအရလိင်တံတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု၏ပြင်းထန်မှုသည် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏အရွယ်အစားနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ activated theရိယာသည်ဒုတိယအာရုံခံစားမှုwasရိယာ (BA 40) ဖြစ်သည်။ သူတို့က parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏အာရုံခံအသိအမှတ်ပြုမှုအဖြစ်လိင်အင်္ဂါများ၏အာရုံခံသတင်းအချက်အလက်များ၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောဖွယ်ရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါ limbic စနစ်၏ activation ဒေသများအကြီးအကျယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခံစားမှုယန္တရားနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်လူသိများကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာ limbic စနစ်၏ thalamus နှင့် amygdala activated ခဲ့ကြသည်။ thalamus ၏ activation လေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအမြင်အာရုံလိင်စိတ်နှိုးဆွအသုံးပြုသောယခင်လေ့လာမှုများမှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် [23, 30-33] ။ ဤလေ့လာမှုများကတင်ပြခဲ့သည်မှာ thalamus သည်အမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိပြီး ဦး နှောက် cortex ၏areaရိယာတစ်ခုသို့ပို့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အချို့လေ့လာမှုများက thalamus အမြင်အာရုံသတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်များအတွက်တံတားအဖြစ်ပြုမူခြင်းနှင့်လည်းလိင်စိတ်နှိုးဆွ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည် [34, 35] ။ သူတို့က thalamus ၏ activation လိင်စိတ်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်အတူစိတ်ခံစားမှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ thalamus နှင့်အတူ activated ခဲ့သော amygdala လည်းလိင်စိတ်နှိုးဆွ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဆိုပါ amygdala ၏ activation ၏ပုံမှန်နားလည်မှု amygdala အမျိုးမျိုးသောအာရုံခံသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့် dorsal striatum, thalamus, ဦး နှောက်ကို stem, prefrontal cortex နှင့် anterior cingulate gyrus မှလုပ်ငန်းများ၌သတင်းအချက်အလက်ကိုပို့ဆောင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် amygdala သည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောရှုပ်ထွေးသောအာရုံခံသတင်းအချက်အလက်များ၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာရှုထောင့် (ဆိုလိုသည်မှာအပျော်အပါးအတိုင်းအတာ) ၏အကဲဖြတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုသတင်းပို့သည်။23, 36] ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွပေးသည့်အခါ amygdala ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားသည်။ ၎င်းသည် anterior cingulate gyrus သို့အမြောက်အများထွက်လာစေနိုင်သည်။
ထို့နောက် anterior cingulate gyrus ကိုသက်ဝင်စေပြီး၎င်းသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏လှုံ့ဆော်မှုယန္တရားများနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုလူသိများသည်။7, 10, 23, 36-39] ။ ယခင်လေ့လာမှုများအရ ACC သည် input အချက်အလက်များ၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာရှုထောင့်များကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်လူသိများသည်။7, 10, 23, 36-39] ။ ဤအမှု၌, ဒီလေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိသည့် anterior cingulate gyrus ၏ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု၏အမူအကျင့်စကားရပ်နှင့်စမ်းသပ်အခြေအနေများကြောင့်ဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအကြားပြည်တွင်းရေးပconflictိပက္ခအကြံပြုထားသည်။ McGuire et al ။  ထို့အပြင် orbitofrontal cortex နှင့် insular လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏စိတ်ခွန်အားနိုးမှုရှုထောင့်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းရည်ညွှန်း, ထိုရည်မှန်းချက်ဆီသို့တိုက်ရိုက်အပြုအမူတွေကို ဦး ဆောင်သော။ Orbitofrontal cortex သည်အနာဂတ်ဆုလာဘ်များ (ဆိုလိုသည်မှာပစ်မှတ်အပြုအမူ၏ရလဒ်အနေဖြင့်ဆုလာဘ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်) ၏ခန့်မှန်းချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုလူသိများသည်။41].
ဒီလေ့လာမှုမှာ activated သည်အခြားဒေသများရှိ putamen, globus pallidus နှင့် precentral gyrus ပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားဒေသများလည်းလိင်စိတ်နှိုးဆွ၏ဇီဝကမ္မယန္တရားနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုယူဆနေကြသည်။ precentral gyrus သည်အဓိကမော်တာareaရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လိင်တံ၏မိမိကိုယ်ကိုလှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်စိတ်နိုးထစဉ်အတွင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။12, 32, 42] ။ အထူးသဖြင့် putamen နှင့် globus pallidus များသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်လုပ်ကွက်ဒီဇိုင်းလေ့လာမှုတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်မပါဝင်ခဲ့ပါ။8, 22, 38, 39, 43], ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ activation ရှင်းလင်းစွာဒီလေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသည် putamen သို့မဟုတ် globus pallidus ၏ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ putamen နှင့် globus pallidus တို့၏အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုသည် hemodynamic တုန့်ပြန်မှုများကိုအခြားဒေသများရှိအခြားနေရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည်။ ဤသည်မှာယခင်blockရိယာဒီဇိုင်းလေ့လာမှုတွင်ဤareasရိယာများကိုမလှုပ်ရှားရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသီးသီး paleostriatum နှင့် neostriatum တွင်ပါဝင်သော Globus pallidus နှင့် putamen ။ အဆိုပါ striatum ထိုကဲ့သို့သော ventral နှင့် dorsal striatum အဖြစ်နှစ်ခုခွဲများသို့ခွဲခြားခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအပေါ် dorsal striatum ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အစဉ်အဆက်လိင်တံတိုးချဲ့မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။7, 23, 43] ။ ၎င်းသည် putamen ရှိလှုပ်ရှားမှုအဆင့်နှင့် penile စိုက်ထူမှုပမာဏအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိသည်။7, 23, 43] ။ အလားတူပင်အချို့သောတိရိစ္ဆာန်သုတေသနပြုချက်များအရလျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုသောအခါသို့မဟုတ်ဘီစီကူလင်လင်အား putamen ကိုလှုံ့ဆော်ရန်လိင်တံတိုးချဲ့မှုကိုပြသခဲ့သည်။44, 45] ။ ထို့အပြင် ventral striatum ၏လှုပ်ရှားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု၏ပုဂ္ဂလဒိive္အဆင့်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်တွေ့ရှိခဲ့သည် [13, 23] ။ ဒီofရိယာ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုကိုအကြံပြုနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာအ ventral striatum လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆုလာဘ်အဖြစ်ရိပ်မိသောအတွက်ဆုလာဘ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်13, 46, 47] ။ ဒုတိယအချက်မှာ ventral striatum ကိုအသက်သွင်းခြင်းသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏မက်လုံးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်မျှော်လင့်ထားသောဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။38] ။ လေ့လာမှုတွင် Globus pallidus နှင့် putamen လှုပ်ရှားမှုသည် striatum ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ဇီဝကမ္မနှင့်ဆုလာဘ်ရှုထောင့်များတွင်ထင်ဟပ်ခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှု၏ကန့်သတ်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။ ပထမ ဦး စွာလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားဘာသာရပ်များကိုသာဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအမျိုးမျိုးရှိသောအမျိုးသမီးများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Self-report တူရိယာကို အသုံးပြု၍ လိင်မှုနှိုးဆွမှုအတိုင်းအတာကိုတိုင်းတာခဲ့ပြီး၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု (ဥပမာ - လိင်တံတိုးချဲ့ခြင်းကိုတိုင်းတာခြင်း) ၏ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအတာကိုအနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်ပြုလုပ်သင့်သည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့်ယခင်လေ့လာမှုများမှရရှိလာသောခြားနားချက်များသည်ကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်ဒီဇိုင်း (ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောသို့မဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု) သို့မဟုတ် fMRI protocol (ဆိုလိုသည်မှာ TR နှင့် TE) ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရရှိခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်နောက်ထပ်သုတေသနပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ စတုတ္ထအချက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါဝင်သူသည် ၇-၁၃ ကြားကြားနှိုးဆွမှုကြားကာလအတွင်းသူတို့၏အခြေခံပြည်နယ်များသို့ပြန်သွားကြောင်းအတည်ပြုမရပါ။ တနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချိန်ကိုအထူးသဖြင့်ဇီဝကမ္မဗေဒ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, လိင်ယောက်ျားနှိုးဆွပြည်နယ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူရန်ငယ်ရွယ်အထီးသင်တန်းသားများကိုအဘို့အလုံလောက်ခဲ့ပါတယ်အတည်ပြုရန်နိုင်ဘူး။ ပုံမှန်နှင့်လိင်မှုနှိုးဆွသောပြည်နယ်များ (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒ) အကြားအကူးအပြောင်းသည်အတော်လေးနှေးကွေးပြီးဖြစ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဒီဇိုင်းတွင်ပြည်နယ်နှစ်ခုအကြားသွားလာရန်ခက်ခဲသည်။
အထက်ပါကန့်သတ်ချက်များရှိနေသော်လည်းဤလေ့လာမှုသည်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးပြု၍ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုအောင်မြင်စွာသွေးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် activated ဒေသများအချိန်နှင့်အမျှဒေသ၏ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုစစ်ဆေးရန် ဦး နှောက်ဒေသအကျိုးစီးပွားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ မကြာခဏပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းလေ့လာမှုများမှာလေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်သော ဦး နှောက်ဒေသများ၏ activation ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်အတွက်ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုမှာ, ငါတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆော်ခြင်းစဉ်အတွင်းဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရလဒ်များကလိင်မှုဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့် ဦး နှောက်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းအပြင်လိင် - တိကျသောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွင်၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများပါ ၀ င်ပါကတွေ့ရှိချက်များသည်ကျန်းမာသောလူတစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုလက္ခဏာများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်မနုropဗေဒကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
JWS, CJC နှင့် JHS တို့သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်း၊ အချက်အလက်ရယူခြင်းသို့မဟုတ်အချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အနက်ဖွင့်ဆိုခြင်းများအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ JWS သည်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သောစာမူကိုရေးဆွဲရန်သို့မဟုတ်အရေးကြီးသောအသိဥာဏ်ပါ ၀ င်မှုအတွက်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ JWS, CJC နှင့် JHS သည်အလုပ်၏မည်သည့်အပိုင်း၏တိကျမှုသို့မဟုတ်သမာဓိနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မေးခွန်းများကိုသင့်တော်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဖြေရှင်းနိုင်ရန်သေချာစေရန်အလုပ်၏ရှုထောင့်အားလုံးအတွက်တာဝန်ခံရန်သဘောတူသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စာရေးသူအားလုံးသည်ထုတ်ဝေမည့်ဗားရှင်းအားအပြီးသတ်အတည်ပြုပေးပြီးဖြစ်သည်။
Ji-Woo Seok, အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
Jin-Hun Sohn, ဖုန်း: + 82-42-821-7404, Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
Chaejoon Cheong, ဖုန်း: + 82-43-240-5061, Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်], Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
၁။ Chivers ML၊ Seto MC၊ Lalumiere ML, Laan E, Grimbos T. အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိင်မှုဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်ပတ်သက်သောမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါအစီအမံများ - meta-analysis ။ လိင်လိင် Behav ။ 1; 2010 (39): 1-5 ။ Doi: 56 / s10.1007-10508-009-9556 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
2. Gillath O, Canterberry အမ်အာရုံကြောသူတော်ကောင်းတရားနှင့် supraliminal လိင်အကြောင်းထိတွေ့မှုဆက်စပ်။ Soc Cogn သည် Neurosci ကိုထိခိုက်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ nsr2011 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3. Rosen RC, Beck JG ။ လိင်စိတ်နိုးထမှုပုံစံများ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များနှင့်လက်တွေ့အသုံးချမှုများ။ Guilford စာနယ်ဇင်း; 1988 ။
4. Andersson KE ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက် Erectile ဇီဝကမ္မနှင့် pathophysiological လမ်းကြောင်း။ J ကို Urol ။ 2003; 170 (2): S6-14 ။ Doi: 10.1097 / 01.ju.0000075362.08363.a4 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
5. Morrell MJ, Sperling MR, Stecker M, Dichter MA ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝက်ရူးပြန်ရောဂါအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအတွက်လိုငွေပြမှု။ အာရုံကြော။ 1994; 44 (2): 243 ။ Doi: 10.1212 / WNL.44.2.243 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
6. Simonsen U, Garcia-Sacristán A, Prieto D. Penile သွေးလွှတ်ကြောများနှင့်စိုက်ထူ။ J ကို Vasc Res ။ 2002; 39 (4): 283-303 ။ Doi: 10.1159 / 000065541 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
7. Arnow BA, Desmond JE, Banner LL, Glover GH, Solomon A, Polan ML, Atlas SW ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲယောက်ျားအတွက် ဦး နှောက်ကို activation နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွ။ ဦး နှောက်။ 2002; 125 (5): 1014-23 ။ Doi: 10.1093 / ဦး နှောက် / awf108 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
စိတ်လှုပ်ရှားမှုသတိ Self- စည်းမျဉ်း၏ 8. Beauregard M က, Levesque J ကို & Bourgouin P. အာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ J ကို Neurosci ။ 2001 [PubMed]
9. Gizewski ER, Krause E၊ Karama S, Baars A, Senf W, Forsting M. အမ်မးအဆင့်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောရာသီလာသည့်အဆင့်များတွင်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဦး နှောက်လှုံ့ဆော်မှုလှုံ့ဆော်မှုကိုကြည့်ရှုစဉ်ကွဲပြားမှုရှိသည် - fMRI လေ့လာမှု။ Exp Brain Res ။ 2006; 174 (1): 101-8 ။ Doi: 10.1007 / s00221-006-0429-3 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
10. Hamann S, Herman RA, Nolan CL, Wallen K. အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုအမြင်တွင်ကွဲပြားမှုရှိသည်။ နတ်နေရော့စီ။ 2004;7(4): 411-6 ။ Doi: 10.1038 / nn1208 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၁၁။ Kim S, Sohn D, Cho Y, Yang W, Lee K, Juh R, Lee K. Brain ကျန်းမာသောလူလတ်ပိုင်းအရွယ်ယောက်ျားလေးများတွင်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်လှုပ်ရှားသည်။ Int J Impot Res ။ 11; 2006 (18): 5-452 ။ Doi:7/ sj.ijir.10.1038 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၁၂။ Mouras H၊ Stoléru S, Bittoun J, Glutron D, Pélégrini-Issac M, Paradis AL, Burnod Y. ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 12; 2003 (20): 2-855 ။ Doi: 69 / S10.1016-1053 (8119) 03-00408 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
13 T. Magn Reson Mater Phys Biol Med တွင်အမြင်အာရုံတိုက်စားမှုနှိုးဆွစဉ်အတွင်း subcortical ဒေသများ၏ 7. Walter M, Stadler J, Tempelmann ကို C, Speck အို, Northoff G. အမြင့် resolution ကို fMRI ။ 2008; 21 (1-2): 103-11 ။ Doi: 10.1007 / s10334-007-0103-1 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
14. Birn RM, Cox RW, Bandettini PA ။ ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သော fMRI တွင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း: အကောင်းဆုံးလှုံ့ဆော်မှုအချိန်ကိုက်ရွေးချယ်ခြင်း။ Neuroimage ။ 2002; 15 (1): 252-64 ။ Doi: 10.1006 / nimg.2001.0964 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
15. Aguirre, G, Detre J, Zarahn E, Alsop Exper စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းနှင့် BOLD နှင့် perfusion fMRI တို့၏ဆွေမျိုး sensitivity တို့။ Neuroimage ။ 2002; 15 (3): 488-500 ။ Doi: 10.1006 / nimg.2001.0990 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
16. Bush, G, Whalen PJ, Rosen BR, Jenike MA, McInerney SC, Rauch SL အဆိုပါရေတွက် Stroop: အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging-validation ကိုလေ့လာမှုအတွက်အထူးပြုထားတဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်အလုပ်။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 1998;6(4): 270-82 ။ Doi: 10.1002 / (SICI) 1097-0193 (1998) 6:4<270 :: AID-HBM6> 3.0.CO; 2-0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
17. D'Esposito M က, Zarahn အီး, Aguirre GK ။ အဖြစ်အပျက် -related အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI: သိမြင်မှုစိတ်ပညာများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Psychol Bull ။ 1999; 125 (1): 155 ။ Doi: 10.1037 / 0033-2909.125.1.155 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
18. Donaldson ကဒီ, Buckner RL ။ ထိရောက်သောပါရာဒိုင်းဒီဇိုင်း. IN P. JEZZARD, FUNCTIONAL MRI (ED ။ ) တွင်တင်ပြသောစာတမ်း၊ ၂၀၀၁ ။
19. Chee MW, Venkatraman V, Westphal C, Siong SC ။ စကားလုံး - ကြိမ်နှုန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်အဖြစ်အပျက်နှင့်ဆက်စပ်သော fMRI ဒီဇိုင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 2003; 18 (3): 186-93 ။ Doi: 10.1002 / hbm.10092 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
20. Bühler M, Vollstädt-Klein S, Klemen J, Smolka MN ။ ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှုဒီဇိုင်းသည် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေသည့်ပုံစံများကိုအကျိုးသက်ရောက်သလား။ fMRI ဒီဇိုင်းများသည်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်သော။ Behav ဦး နှောက် Funct ။ 2008;4(1): 30 ။ Doi: 10.1186 / 1744-9081-4-30 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
21. Lang PJ, Bradley MM, Cuthbert BN ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ရုပ်ပုံစနစ် (IAPS) - ပုံနှင့်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ။ Tech အစီရင်ခံစာ. ၂၀၀၈; A-2008 ။
22. Stoléru S, Fonteille V, Cornélis C, Joyal C, Moulier V. ကျန်းမာသောအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အော်ဂဇင်ကိုလေ့လာခြင်း။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis ။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2012; 36 (6): 1481-509 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2012.03.006 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
23. Redouté J, Stoléru S, Grégoire MC, Costes N, Cinotti L, Lavenne F, Pujol JF ။ လူ့ယောက်ျားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 2000; 11 (3): 162-77 ။ Doi: 10.1002 / 1097-0193 (200011) 11:3<162 :: AID-HBM30> 3.0.CO; 2-A ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
24. Lane RD, Reiman EM, Ahern GL, Schwartz GE, Davidson RJ ပျော်ရွှင်မှု၊ ၀ မ်းနည်းမှုနှင့်ရွံရှာမှုတို့၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997; 154 (7): 926-33 ။ Doi: 10.1176 / ajp.154.7.926 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
25. Lane RD, Reiman EM, Bradley MM, Lang PJ, Ahern GL, Davidson RJ, Schwartz GE ။ သာယာသောနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ Neuroanatomical ဆက်စပ်မှု။ Neuropsychologia ။ 1997; 35 (11): 1437-44 ။ Doi: 10.1016 / S0028-3932 (97) 00070-5 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
26. Corbetta M, Miezin FM၊ Dobmeyer S, Shulman GL, Petersen SE ။ ပုံသဏ္,ာန်၊ အရောင်နှင့်အမြန်နှုန်းတို့၏အမြင်အာရုံခွဲခြားမှုကာလအတွင်းရွေးချယ်ပြီးခွဲခြားထားသောအာရုံကို - positron ထုတ်လွှတ်ခြင်း tomography ဖြင့်အလုပ်လုပ်သောခန္ဓာဗေဒ။ J ကို Neurosci ။ 1991; 11 (8): 2383-402 ။ [PubMed]
၂၇။ Stoleru S၊ Gregoire MC, Gerard D, Decety J, Lafarge E, Cinotti L, Rada H. Neuroanatomical ဆက်စပ်မှုသည်ယောက်ျားများတွင်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လိင်လိင် Behav ။ 27; 1999 (28): 1-1 ။ Doi: 21 / A: 10.1023 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၂၈။ Georgiadis JR၊ Farrell MJ၊ Boessen R၊ Denton DA၊ Gavrilescu M၊ Kortekaas R၊ Egan GF ။ ဂေဟစနစ်သက်တမ်းနှင့်အတူအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း Dynamic subcortical သွေးစီးဆင်းမှု: တစ် perfusion fMRI လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 28; 2010 (50): 1-208 ။ Doi: 16 / j.neuroimage.10.1016 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၂၉။ Kell CA၊ ဗွန် Kriegstein K၊ Rösler A၊ Kleinschmidt A၊ Laufs H. လူ့လိင်တံ၏အာရုံခံ cortical ကိုယ်စားပြုမှု - အထီး homunculus ရှိ somatotopy ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်း။ J ကို Neurosci ။ 29; 2005 (25): 25-5984 ။ Doi:7/ JNEUROSCI.10.1523-0712 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
30. Park K, KK HK, Seo JJ, Kim HJ, Ryu SB, Jeong GW ။ အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထတုံ့ပြန်မှု၏နှောက်ဒေသများအကဲဖြတ်ဘို့အသွေး - အောက်ဆီဂျင် - အဆင့် - မှီခိုအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ ဆီးလမ်းကြောင်း။ 2001; 57 (6): 1189-94 ။ Doi: 10.1016 / S0090-4295 (01) 00992-X ကို။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၃၁။ Park K၊ Seo J, Kang H, Ryu S, Kim H, Jeong G. သွေးကြောဆိုင်ရာစင်တာများကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့မှီခိုမှု (BOLD) အလုပ်လုပ်သော MRI အသစ်အလားအလာ။ Int J Impot Res ။ 31; 2001 (13): 2-73 ။ Doi: 81 / sj.ijir.10.1038 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လူ့အထီးများတွင်ဓာတ်ပုံလှုံ့ဆော်မှုများက evoked penile စိုက်ထူ၏ 32. Moulier V ကို, Mouras H ကို, Pélégrini-Issac M, Glutron: D, Rouxel R ကို, Grandjean B, Stoléruအက်စ် Neuroanatomical ဆက်စပ်မှု။ Neuroimage ။ 2006; 33 (2): 689-99 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2006.06.037 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
33. Meseguer V, Romero MJ, Barrós-Loscertales A, Belloch V, Bosch-Morell F, Romero J. အတက်အကျနှင့်ရန်လိုသည့်စနစ်များကိုစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများဖြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့် block-design fMRI လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုသည်။ Psicothema ။ 2007; 19 (3): 483-8 ။ [PubMed]
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကောက်နုတ်ချက်များကိုကြည့်ရှုစဉ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းတွင် ဦး နှောက်ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည့် Karama S, Lecours AR, Leroux JM, Bourgouin P, Beaudoin G, Joubert S, Beauregard အမ်။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 34; 2002 (16): 1-1 ။ Doi: 13 / hbm.10.1002 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
35. Metzger CD, Eckert U, Steiner J, Sartorius A, Buchmann JE, Stadler J, Abler B. High field FMRI သည်သီးခြားသိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို thalocortical ပေါင်းစပ်ခြင်းအားထုတ်ဖော်ပြသသည်။ Neuroanat ရှေ့။ 2010; 4: 138 ။ Doi: 10.3389 / fnana.2010.00138 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
၃၆။ Ferretti A၊ Caulo M၊ Del Gratta C၊ Di Matteo R၊ Merla A, Montorsi F, Rossini PM ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု၏ဒိုင်းနမစ် - fMRI မှထုတ်ဖော်ပြထားသော ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ရှားမှု၏ကွဲပြားသောအစိတ်အပိုင်းများ။ Neuroimage ။ 36; 2005 (26): 4-1086 ။ Doi: 96 / j.neuroimage.10.1016 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
37. Paul T, Schiffer B, Zwarg T, Krüger TH, Karama S, Schedlowski M, Gizewski ER ။ လိင်ကွဲခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းယောက်ျားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကို ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှု။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 2008; 29 (6): 726-35 ။ Doi: 10.1002 / hbm.20435 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
38. Ponseti J, Bosinski HA, Wolff S, Peller M, Jansen O, Mehdorn HM, Siebner HR ။ လူသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်သော endophenotype ။ Neuroimage ။ 2006; 33 (3): 825-33 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2006.08.002 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
39. Rauch SL, Shin LM, Dougherty DD, Alpert NM, Orr SP, Lasko M, Pitman RK ။ ကျန်းမာသောလူများတွင်လိင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှိုးဆွစဉ်အတွင်းအာရုံကြော activation ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res Neuroimaging ။ 1999; 91 (1): 1-10 ။ Doi: 10.1016 / S0925-4927 (99) 00020-7 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
40. McGuire P ကို, Bench ကို C, Frith ကို C, Marks ငါ Frackowiak R ကို, obsessive- compulsive ဖြစ်ရပ်များ၏ Dolan R. Functional ခန္ဓာဗေဒ။ Br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 164 (4): 459-68 ။ Doi: 10.1192 / BJP ။ 164.4.459။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
41 Roesch MR, Olson CR ။ frontal cortex အတွက်မျှော်လင့်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2007; 1121 (1): 431-46 ။ Doi: 10.1196 / annals.1401.004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
42 Stoléru S, Redouté J, Costes N, Lavenne F, Le Bars D, Dechaud H, Pujol JF ။ hypoactive လိင်အလိုဆန္ဒရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res Neuroimaging ။ 2003; 124 (2): 67-86 ။ Doi: 10.1016 / S0925-4927 (03) 00068-4 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Erotic ဗီဒီယိုကလစ်များဖြင့်မှန် - အာရုံခံဆဲလ်စနစ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းအားဖြင့် Mouras H၊ Stoléru S၊ Moulier V၊ Pélégrini-Issac M၊ Rouxel R၊ Grandjean B၊ Bittoun ဂျေ။ Neuroimage ။ 43; 2008 (42): 3-1142 ။ Doi: 50 / j.neuroimage.10.1016 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
44. Robinson BW, Mishkin အမ် Penile စိုက်ထူ Macaca mulatta အတွက် forebrain အဆောက်အ ဦ များမှ evoked ။ Arch Neurol ။ 1968; 19 (2): 184-98 ။ Doi: 10.1001 / archneur.1968.00480020070007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
45. Worbe Y၊ Baup N၊ Grabli D၊ Chaigneau M, Mounayar S, McCairn K, Tremblay L. အမူအကျင့်နှင့်မျောက်စရီယမ် striatum တွင်ဒေသခံတားစီးမှုကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာရောဂါများ။ Cereb Cortex ။ 2009; 19 (8): 1844-56 ။ Doi: 10.1093 / cercor / bhn214 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အဓိကကျသည်မှာ Sabatinelli D၊ Bradley MM, Lang PJ, Costa VD၊ Versace F. Pleasure သည်လူ့နျူကလိယ accumbens နှင့် medial prefrontal cortex ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ J ကို Neurophysiol ။ 46; 2007 (98): 3-1374 ။ Doi:9/ jn.10.1152 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
47. Sescousse, G, Redouté J, Dreher JC ။ လူ့ orbitofrontal cortex အတွက်ဆုတန်ဖိုးကို coding ၏ဗိသုကာ။ J ကို Neurosci ။ 2010; 30 (39): 13095-104 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3501-10.2010 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]